Hey’addaha ammaanka oo xalay ka shiray Amniga doorashooyinka ka dhacaya Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Kulanka xalay oo dhex maray Maamulka Gobolka Banaadir, Taliyeyaasha Ciidamada Booliska, Nabadsugida, Asluubta, abaanduulaha ciidanka xoogga iyo saraakiisha kale ayaa looga hadlay qorshayaasha lagu sugayo ammaanka Caasimada maalmaha ay doorashada dhici doonaan.
Hey’addaha ammaanka dowladda ayaa qeybsaday howlaha sugida amniga magaalada Muqdisho, inta ay ka dhacayaan doorashooyinka, iyadoo la xiri doono waddooyin dhowr ah oo halbowle u ah isu socodka degmooyinka.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane ayaa saxaafada uga warbixiyay ayaa sheegay in shirkan uu ahaa mid amni oo ay ugu muhiimsaneyd sugida amniga Muqdisho.
“Waxaa laga hadlay amniga Caasimada, waxaa la qeybsaday howlaha loo sugayo ammaanka illaa laga dooranayo Madaxweynaha”ayuu yiri Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir.
Sidoo kale Afhayeenka ayaa sheegay in laga hadlay isku xirnaanta iyo wada shaqeynta ciidamada kala duwan ee laamaha ammaanka.
Doorashada Madaxweynaha iyo tan Guddoonka Baarlamaanka ayaa ah tan ugu muhiimsan ee ka dhici doonta Muqdisho, waxaana laamaha ammaanka ay diyaariyeen qorshayaal lagu sugayo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka.